Cruise Resume: Carnival Sunshine Wicitaanada Ocho Rios Isniintii
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Cruise Resume: Carnival Sunshine Wicitaanada Ocho Rios Isniintii
Jebinta Wararka Caalamka • Caribbean • saaciday inay • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Hawlaha doomaha ayaa dib uga bilaaban doona Jamaica Isniinta, Ogosto 16, 2021, iyada oo wicitaanka dekedda Carnival Sunshine laga waco Ocho Rios.
The Carnival Sunshine ayaa loo qorsheeyay inay ka soo wacdo Dekedda Ocho Rios.
Waa markabkii ugu horreeyay ee dalxiis oo ay la socdaan rakaab caalami ah oo ku soo xirta dekedda Jamaican tan iyo bilowgii masiibada COVID-19.
Tani waxay astaan ​​u noqon doontaa tallaabo weyn oo dib -u -furista wajiga leh ee dalxiiska Jamaica, oo ay si xun u saameysay masiibada adduunka.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan kula taliyo in Jamaica ay ugu dambayn arki doonto soo noqoshada doonnida Isniinta Ogosto 16 -keeda. Waxaan soo dhaweynaynaa dib -u -bilaabashadan maadaama aan ognahay in kumanaan reer Jamaica ah ay noloshoodu ku tiirsan tahay warshadaha maraakiibta maraakiibta, waxayna saamayn togan ku yeelan doontaa guud ahaan dhaqaalaheena, ”ayuu yiri Wasiirka Dalxiiska, Mudane. Edmund Bartlett.
“Waxaan rabaa inaan dadweynaha u xaqiijiyo in wicitaankan loo maareeyo si waafaqsan hab-raacyada adag ee caafimaadka iyo badbaadada COVID-19 kuwaas oo ay hagayaan heerarka caalamiga ah iyo hab-dhaqanka ugu wanaagsan si loo hubiyo amniga iyo ilaalinta muwaadiniinteena iyo sidoo kale booqdayaasha. Intaa waxaa sii dheer, markabka waxaa loo maareeyaa si waafaqsan Amarka Shiraaca Shuruudda leh ee Safarrada La Joojiyay iyo Kuwa Xaddidan ee ay soo saartay Xarunta Xakamaynta Cudurrada Mareykanka (CDC). Imaanshaha Carnival Sunshine Isniintii waxay calaamad u tahay horumar weyn oo ku aaddan dadaallada soo kabashada iyo dib -u -bilaabidda hawlgallada maraakiibta, kuwaas oo la hakiyay masiibada awgeed, ”ayuu raaciyay.
Iyada oo la raacayo tallaabooyinka adag ee xukuma dib-u-bilaabashada maraakiibta badda qiyaastii 95% shaqaalaha iyo rakaabka ayaa si buuxda loo tallaaley dhammaan rakaabkana waxaa laga rabaa inay bixiyaan caddayn natiijooyin taban oo ka soo baxay tijaabada COVID-19 oo la qaaday 72 saacadood gudahood markabka, ”ayuu yiri Wasiir Bartlett . Waxaa kale oo la tilmaamay in marka la eego rakaabka aan la tallaalin, baaritaanka PCR waa waajib, dhammaan rakaabkana waa la baari doonaa oo la tijaabin doonaa (antigen) marka laga soo degayo.
Markay saaran yihiin, shaqaaluhu sidoo kale waxaa laga rabaa inay u hoggaansamaan qawaaniin adag oo ay u xilsaareen qaab -dhismeedka rasmiga ah ee Amarka Iibinta Shuruudaysan. Tani waxay u baahan tahay in la qaado tallaabooyin ka -hortag ah, oo hababka ilaalada iyo jawaab -celinta ay markasta saaran yihiin guddiga.
Professor Gordon Shirley, Madaxweynaha & Maamulaha, Maamulka Dekedda Jamaica (PAJ), ayaa tilmaamay in “wicitaanka Carnival Sunshine uu matalayo bilo wada shaqayn joogto ah iyo wada -hadal lala yeesho wada -hawlgalayaasheenna safarka maraakiibta iyo Wasaaradda Caafimaadka iyo Fayo -qabka (MoHW) . Daneeyayaashaan waxay bixiyeen taageero iyo hagitaan aad u weyn si ay uga caawiyaan PAJ howlaha dib-u-habeynta oo leh heerar caalami ah iyadoo la tixgelinayo astaamaha cusub ee COVID-19. U diyaargarowga dib -u -bilaabashada hawlaha maraakiibta maraakiibta gudaha Jamaica, waxaan kor u qaadnay dhammaan tas-hiilaadka dekadeena si waafaqsan tilmaamaha iyo borotokoolka COVID-19 dhammaan dekadahayagana waxaa dib loogu habeeyay qolal go'doon ah iyo tas-hiilaad fayadhowr. ”
Wuxuu intaas ku daray: “Waxaan si dhow ula shaqeynay MoHW sannadkii la soo dhaafay annagoo tixgelinnay talooyinkooda, waxaan raacnay sayniska, sidaa darteed PAJ waxay ku kalsoon tahay awoodda aan u leenahay inaan bixinno waayo-aragnimadeena caadiga ah ee rakaabka ah ee ku guuleysta badqabka oo ammaan ah oo sugan deegaanka, in kasta oo ay jiraan caqabadaha COVID-19. Waxaan si dhab ah ugu mahadcelineynaa MoHW iyo la -hawlgalayaasheena dalxiiska ee taageeradooda aan kala go 'lahayn inta lagu jiro waqtiyada imtixaanka waxaanan sugeynaa dib -u -bilaabidda waaxdeenna maraakiibta maaddaama aan ognahay saamaynta togan ee weyn ee warshadu ku leedahay ganacsiyada kale iyo guud ahaan dhaqaalaha Jamaican. ”
“Waan ku faraxsannahay inaan noqonno markabkii ugu horreeyey ee dalxiis taga ku noqo Jamaica iyo inay martida siiyaan fursad ay ku soo maraan dhammaan quruxda dalka, ”ayay tiri Christine Duffy, Madaxweynaha Khadka Carnival Cruise Line. "Anigoo ku hadlaya magaca Carnival, waxaan jeclaan lahaa inaan si shaqsi ah ugu mahadceliyo Wasaaradda Dalxiiska, Wasaaradda Caafimaadka iyo Fayo -qabka, iyo la -hawlgalayaasheena oo nagala shaqeeyay sidii aan dib ugu soo celin lahayn Jamaica," ayay raacisay.
Rakaabka ayaa loo oggolaan doonaa inay ka degaan markabka si ay uga qaybgalaan safarro dhex mara COVID-19 Corridors Corridors, kuwaas oo loo diyaariyey booqdayaasha joogsiga leh oo leh rikoor muujinaya waxqabad muddo ka badan hal sano. Heerka wanaagsan ee waddooyinka dhexdooda ah ayaa ah 0.6 boqolkiiba.
Waddooyinka waxaa si wadajir ah u kormeera Shirkadda Horumarinta Waxsoosaarka Dalxiiska (TPDCo), Wasaaradda Caafimaadka iyo Fayo -qabka, Wasaaradda Amniga Qaranka, Wasaaradda Dawladaha Hoose iyo Horumarinta Reer Miyiga, iyo Wasaaradda Gaadiidka iyo Macdanta.
“Dowladda Jamaica waxay kala xaajoonaysay dhowr khadadka safarka, iyo daneeyayaasha ku habboon, oo ku saabsan dib -u -bilaabidda hufan ee hawlgallada maraakiibta iyadoo la ilaalinayo hab -raaca caafimaadka iyo badbaadada. Sidaa darteed aad ayaan ugu faraxsanahay in tani ugu dambayntii ay dhab tahay. Waxaan bogaadinayaa dadaallada dhammaan daneeyayaasha oo ay ku jiraan PAJ, Wasaaradda Caafimaadka iyo Fayo -qabka, iyo Jamaica Vacations Limited (JAMVAC) kaalintii ay ka geysteen hubinta in si nabadgelyo leh oo nabadgelyo leh dib loogu bilaabo hawlihii maraakiibta ee Jamaica, ”ayuu yiri Wasiir Bartlett.